Semalt Expert dia mamelatra ireo Tools Extraction Data Website
Ny famaritana ny tranonkala dia manangona ny angon-tserasera . Ny olona dia mampiasa fitaovana fampiasana tranonkala hahazoana vaovao mahaliana avy amin'ny tranonkala izay mety ho azo ampiasaina amin'ny fanondranana any amin'ny toeram-pamindrahim-pejam-pejam-peo iray hafa na tahiry an-tserasera. Ny rindrambaiko tranokala vohikala dia fitaovana iray izay azo ampiasaina hitsikerana sy hanangona vaovao momba ny tranokala toy ny sokajy vokatra, tranokala manontolo (na ampahany), votoaty ary sary. Azonao atao ny mahazo votoaty tranonkala avy amin'ny tranonkala iray hafa tsy misy API ofisialin'ny fandefasana ny data.
Ao amin'ity lahatsoratra SEO ity dia misy ireo fitsipika fototra izay ampiasàn'ireo fitaovam-pambolena amin'ny aterineto ireo. Azonao atao ny mianatra ny fomba nandalovan'ny spider ny fizotran'ny fitsangatsanganana mba hamonjena ireo antonta-tranonkala amin'ny fomba iray mifototra amin'ny fanangonana tahirin-tranonkala. Hodinihintsika ny tranokala BrickSet momba ny angon-drakitra. Ity tranonkala ity dia tranonkala mifototra amin'ny vondrom-piarahamonina izay ahitana fampahalalana marobe momba ny fametrahana LEGO. Tokony ho afaka hamorona fitaovana mahomby Python ianao, izay afaka mandeha any amin'ny tranokalan'ny BrickSet ary mamonjy ny fampahalalana amin'ny antontan'isa eo amin'ny efijery. Mivelatra io tranokala io ary mety hampiova ny fanovana amin'ny ho avy.
Ho an'ny iray amin'ny fanaovana scrapper ny Python dia mila tontolo iainana fampandrosoana ho an'ny Python 3. Ity tontolo manodidina ity dia Python API na Software Development Kit ho an'ny ampahany sasany amin'ny ampahany ilaina ny rindrambaiko mpikirakira ny tranonkala. Misy dingana vitsivitsy izay azonao atao rehefa manao an'io fitaovana io:
Mamorona grateur fototra
Amin'ity sehatra ity, mila ahitanao sy mahita ny tranonkala tranonkala ara-dalàna. Hatramin'izao dia afaka mandray ny pejy web ianao ary mamoaka ny vaovao tianao avy amin'izy ireo. Ny tenim-pampianarana samihafa dia afaka mahavita ny vokatr'izany. Ny mpandefa anao dia tokony ho afaka hanindry pejy mihoatra ny pejy iray, ary koa afaka mamonjy ireo angona amin'ny fomba samihafa.
Mila maka kilasy Scrappy amin'ny spider ianao. Ohatra, ny anaran'ny spider dia brickset_spider. Ny famoahana dia tokony hipoitra toy izao:
Ity fehezan-teny ity dia Python Pip izay afaka mitranga tahaka izany ao amin'ny string:
Ity famoronana ity dia mamorona lahatahiry vaovao. Azonao atao ny mivezivezy aminy ary mampiasa baiko hafa toy ny fanondro mampihetsi dia toy izao manaraka izao: